I-airline enkulu kunayo yonke eRussia Federation, i-Aeroflot eyaziwa kakhulu emoyeni eRussia. Njalo ngonyaka inkampani ithwala abagibeli abayizigidi ezingu-10. Izindiza zemikhumbi ezithandekayo nezanamuhla zinezindiza ezingaphezu kuka-167. Lokhu akusiyo kuphela othwala yangaphakathi, kodwa futhi nomthwali wezwe. Indiza yalesi sezindiza iya emazindiza angu-122 emhlabeni jikelele.
Le nkampani iyingxenye yezindiza ezinkulu ze-Europe futhi inomkhumbi omncane kunazo zonke eYurophu. Imishini yobuchwepheshe iyamangalisa. Izikhungo zanamuhla zokuqeqeshwa kwabasebenzi bezindiza, izikhungo zokuqeqesha abashayeli bezindiza abasha, izikhungo zabo kanye nezinsizakalo zokusekela abagibeli.
Isivinini sokuvuselelwa kabusha kwezobuchwepheshe kwenkampani yezinhlobo ezintsha kunama-20% ngaphambi kwezinga lokudala ingqalasizinda yomoya eRussia. Le nkampani yakha ingqalasizinda yayo yokuqeqesha nokuqeqesha abasebenzi, kuhlanganise nakwamanye amazwe. Ngo-2011, isikole sethu sezindiza sivulwe, esikhiqiza futhi sisebenzela abaqhubi bezindiza abangaphezu kuka-160 ngonyaka. Ukulahlwa kwenkampani ethi "Aeroflot" yiyona enkulu kunazo zonke futhi iyingqayizivele e-Europe Flight Control Center.
Amasheya ase-Aeroflot ayitshalomali elizuzisa futhi elithembisayo namuhla. Banika ilungelo lokuthola izabelo futhi bahlanganyele enhloko-dolobha yezindiza. Ngaphezu kwalokho, ungasebenzisa ukuzithenga kwezimakethe zokugcina izimali futhi uthengise amasheya ngaphezulu kakhulu.
I-Aeroflot ayinawo ukuncintisana ngqo eRussia futhi iyinkampani yezindiza yasekhaya ephumelele kakhulu.
Umlando wenkampani enkulu
Umlando we-Aeroflot uyamangalisa futhi ubangela imibuzo eminingi ethakazelisayo, eyinkinga kakhulu ukuthola izimpendulo. I-Aeroflot ibheka njengezindiza zangasese, kodwa akulona iqiniso ngokuphelele. Ngenye yezindiza ezindala kakhulu emhlabeni. I-Aeroflot yasungulwa emuva ngo-1923, kodwa igama lihlukile. "Dobrolet" - okuthiwa le giant emakethe yokuthutha emoyeni. Ngo-1932 kuphela inkampani yathola igama layo elidumile. Ubani ophethe i-Aeroflot? Kubantu! Yileyo ndlela noma yisiphi isakhamuzi sase-USSR esingaphendula.
Kuze kube ngu-1991 u-Aeroflot owayengumholi we-USSR futhi kwakuwukuphela kwezindiza. Le nkampani ayihlanganisi ukuthutha abagibeli nabangaphandle kuphela. Yenza imisebenzi yempi. Ngaphezu kwalokho, kwakuyi -carrier enkulu kunazo zonke emhlabeni. Izimoto zenkampani yenkampani azixhomeke kubakhiqizi bangaphandle, ngoba kwakungokuphepha kokuvikeleka kombuso. Amasheya ase-Aeroflot ayehlala ehlelekile, ngisho nangemva kokuwa kwe-USSR.
Ukuwa kwezwe akuzange kuthembise inkampani noma yini enhle. Ukuze uhlale unomncintiswano ezweni elisha, inkampani yama-2000s yenze umsebenzi omkhulu kulo mfanekiso. Imibala yezinkampani, ukudweba izindiza, uhlobo lwabasebenzi ngisho nokusebenza kwebhizinisi kushintshile. Kodwa-ke, uma kwakungekhona ukusekelwa kukahulumeni waseRussian Federation, akuyazi, inkampani izokwazi ukusinda ezikhathini ezinzima.
Inqola enkulu kunazo zonke izithuthi zomoya zitholakala ku-Aeroflot kuphela. Inqubomgomo yenkampani ukuthi leyo ndege ayihlali isikhathi eside kule mikhumbi. Izindiza ezindala zithengiselwa kwezinye izindiza futhi zithatha abasha. Emikhawulweni yenkampani kunezindiza eziningi kangangokuthi kukhona wonke amamodeli athandwayo abakhiqizi bamazwe angaphandle.
Okumnandi kakhulu ukuthi inkampani isekela umkhiqizi wasekhaya. Imikhumbi yezindiza zasekhaya ifakwe "Super Jeti" entsha yokukhiqizwa kwekhaya. Ngokushesha izimoto zenkampani zizogcwaliswa ngezindiza zakamuva zombuso emhlabeni - МС21.
Ubani ophethe i-Aeroflot?
Ezweni lanamuhla, umsindo wolwazi luyinto evamile. Ulwazi akulona iqiniso ngaso sonke isikhathi. Umonakalo omkhulu emfanekisweni wenkampani uletha amahemuhemu ukuthi awusaseyena ophethe inkampani yasekhaya. La mahemuhemu ayenaso izizathu ezicacile. Iqiniso liwukuthi ukuqeqesha abagibeli bezindiza zomphakathi kuyinkqubo ende futhi enamandla kakhulu. Abaqeqeshi bezindiza, nakuba banolwazi olwanele lwenkampani, kodwa abafaneleki ngokwanele ukuba babe ngabaphathi bezindiza. Ukuze alungise ukusweleka kwamakhomikhumbi wemikhumbi, u-Aeroflot waqala ukuqasha abagibeli bezindiza bezindiza zomphakathi kulokhu okuthunyelwe.
Ubani ophethe i-Aeroflot? Impendulo eqondile ayikwazi ukunikezwa. I-Aeroflot yinkampanini yokubambisana esesidlangalaleni. Wonke umuntu angafaka izimali zakhe siqu kumasheya enkampani. Amasheya anika umnikazi ilungelo lokuhlanganyela enkampanini. Ngakho, i-share enkulu, amalungelo amaningi enkampanini.
Inzalo elawulwayo ingokuqondile kumsunguli we-Aeroflot, okungukuthi, kuhulumeni waseRussia Federation. Isigxobo sokulawula singama-51%, okuvumela ukuthi inkampani ibe ngumnikazi wesifunda. Zonke amahemuhemu mayelana nobunikazi besigxobo sokulawula enhlanganweni yangaphandle yezomthetho ayikho nje amahemuhemu.
Naphezu kwezibalo zomgomo, akuwona wonke umuntu olungele ukukholelwa iqiniso elilodwa. Ama-49% wokugcina amasheya angaba yimuphi umuntu, ikakhulukazi izinhlangano ezingokomthetho zangaphandle noma abantu ngabanye. Lokhu sekuyisikhathi eside isikhubekiso kanye nensimbi emzabalazweni wezombangazwe wezinhlangano ezihlukene. Izingxabano ngokuthi ngubani ophethe i-Aeroflot, zigcinwa ngisho nasezinsukwini zethu. Nokho, ngokusho kwezibalo, izakhamuzi zaseRussia nezinkampani zinamaphesenti angaba ngu-35 emasheya asele.
Kusukela ngo-2009, ukuthunyelwa koMqondisi Jikelele we-Aeroflot kuye kwahlala uVitaly Gennadievich Savelyev. Iminyaka emihlanu yokuqala kule ndawo futhi inqubomgomo entsha yenkampani yabonakala isithelo kakhulu. U-Vitaly Gennadievich wamiswa ekuthunyelwe futhi.
Isikhumulo sezindiza (Kubi): incazelo kanye nomlando
Thailand Exotic: Suvarnabhumi Airport. zezindiza ezinkulu zamazwe ngamazwe yezwe
Izikhumulo zezindiza Russia: uhlu enkulu
«Nokia 6300»: izici nokubuyekezwa mayelana nomakhalekhukhwini
UVladimir Larin: Biography namabhuku
"Ogaxekile" - Ukukhangisa Noma Cha? Experience siqu
Indlela beveza isidlaliso?